Adeegga Xarunta Saadka & Soo Saaraha | Processing Birta Hengli
Xarunteena Saadka ayaa la aasaasay dhammaadkii 2014, ilaa 50 shaqaale ah, iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda macluumaadka ee ERP iyo maaraynta qaanadda si loo hubiyo saxnaanta alaabta la keydinayo.
Nidaamyada alaabada otomaatigga ah waxay ku shaqeeyaan iyagoo iskaan ku samaynaya barcode qaybaha. Qalabka baarista ayaa loo adeegsadaa in lagu akhriyo barcode-ka, macluumaadka ku qoran cinwaanka waxaa lagu akhriyaa mashiinka. Macluumaadkan waxaa dabagal ku haya nidaamka kombiyuutarka dhexe. Tusaale ahaan, amarka iibsigu wuxuu ka koobnaan karaa liistada waxyaabaha loo soo jiidayo baakadka iyo rarka. Nidaamka dabagalka alaabada wuxuu u adeegi karaa shaqooyin kala duwan kiiskan. Waxay ka caawin kartaa shaqaaluhu inuu helo alaabta liiska amarka ee bakhaarka, wuu qori karaa macluumaadka dhoofinta sida nambarada raadraaca iyo cinwaanada dirista, waxayna ka saari kartaa alaabtan la soo iibsaday ee tirakoobka si loo hayo tiro sax ah oo ka mid ah alaabada.
Xogtaan oo dhami waxay la shaqeeyaan tandem si ay u siiyaan ganacsiyada macluumaadka waqtiga dhabta ah ee dabagalka macluumaadka. Nidaamyada maareynta alaabtu waxay fududeynayaan helitaanka iyo falanqaynta macluumaadka alaabada waqtiga dhabta ah iyadoo la raadinaayo xog kaydinta xogta waana qeyb muhiim u ah ganacsi kasta oo dhaqaaqaya alaab.
Nidaamka ERP wuxuu hagaajiyaa wax ku oolnimada (iyo markaa faa'iidada) iyada oo loo marayo hagaajinta sida loo isticmaalo kheyraadka Hengli, ha ahaato ilahaasi waqti, lacag, shaqaale ama wax kale. Ganacsigeennu wuxuu leeyahay habsocod bakhaarro iyo bakhaarro, sidaa darteed barnaamijka 'ERP software' wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo hawlgalladaas si uu si wanaagsan ula socdo oo u maareeyo alaabada.
Tani waxay fududeyneysaa in la arko inta tirakoob ee la heli karo, waxa alaab ah ee alaabta la bixinayo la keenayo, waxa alaab ah ee ka imanaya iibiyeyaasha iyo in ka badan.
Si taxaddar leh ula socoshada iyo dabagalka hawlahan waxay gacan ka geysaneysaa in meheradda laga ilaaliyo in ay wax gabaabsi ahaato, si xun u maareynta gaarsiinta iyo arrimaha kale ee suurtagalka ah.
Hore: Adeegga Mashiinka CNC
Xiga: Adeegga Goynta Plasma & Ololka